I-IMM ecwangcisiweyo 'ye-Smart City yokusebenzela' e-Held | RayHaber
ikhayaETURKEYSithili saseMarmara34 IstanbulI-IMM ilungiselelwe 'iSixeko sokusebenzela isiXeko'
18 / 11 / 2019 34 Istanbul, JIKELELE, Highway, Systems Wheel Wheel, Sithili saseMarmara, ETURKEY
smart umzi ohlelwe ibb
Yacwangciswa yi-IMM 'iSixeko saseWorkshop' yabanjwa; Indawo yokusebenzela ye-N Smart City ”ehlelwe yi-Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) ye-Intelligent City Directorate 8 ibibanjwe nge-5 kaLwesihlanu eFlorya Crowne Plaza Hotel ngokuthatha inxaxheba kwezixhobo zetekhnoloji zesizwe nezelizwe jikelele.
ETurkey kumasifundisane zathatha imini yonke kunye inxaxheba iinkampani asakhasayo smart ubugcisa yocwangciso lwedolophu ehlabathini, Istanbul i-Smart Cities luphucula indlela indawo kwi imephu ezidolophini Intelligent, Izinto intanethi (IOT), Big Data, Artificial Intelligence kunye Solutions zohlahlelo iimveliso kunye neenkonzo eziveliswe nkampani imiba zixoxwe ngokweenkcukacha.
I-IMM, iinkampani ezihlangeneyo; I-ISBAK, Isttelkom, Belbim, ISKI, IETT kunye neenkampani ezininzi zetekhnoloji ezithathe inxaxheba kumasifundisane, iinkampani zetekhnoloji zinganikeza abantu baseIstanbul iimveliso zobugcisa ezongezelelekileyo zexabiso kunye neenkonzo abazisiweyo.
Ii-Giants zeTekhnoloji zabelana ngamava abo kunye neemveliso
Kwintetho yakhe yokuvula, u-Erol ÖZGÜNER, oyiNtloko yeCandelo leComputer, wanika ulwazi malunga nembono ye-IMM ye-Smart City Technologies kwithuba elitsha, izikhundla eziza kuthatha i-IMM kule nkqubo kunye nendlela abacwangcisa ngayo ukubonelela ngeenkonzo ezihlanganisiweyo zetekhnoloji kubemi base-Istanbul. Ucacisile ukuba lonke utyalo mali lobuchwephesha kweli xesha litsha licetyelwe ukuphucula umgangatho wobomi babantu base Istanbul. U-gzgüner wagxininisa ukuba imali ezakwenziwa kutyalo-mali lukawonkewonke kwaye ke ngoko bafuna ukuthatha isigqibo esifanelekileyo ngokumamela bonke abanini bemveliso kukhetho lwemveliso yezobugcisa.
Ke, I-IMM kunye nabo bonke abathathi-nxaxheba, ukuCwangciswa kweSixeko saseSmart, kwi-Intanethi yezinto (IoT), Idatha enkulu, ubuchule beArtificial Intelligence kunye neeSisombululo soCazululo ziye zacebiswa ngemiboniso yeenkampani ezinkulu zezobuchwephesha ezifana neAmazon, Google, ATOS kunye neHuawei, kunye neenkcazo zenkampani eziphambili ezifana neKoç Digital neTurkcell kunye nezixhobo zeteknoloji yelizwe lethu. Imiba enaniselana ngayo. Iinkampani zikhankanye izisombululo zetekhnoloji entsha kunye nezibonelelo zokuzisebenzisa kwi-IMM.
Kumasifundisane, IoT iiplatifomu zeIoTul, ii-layers, iinkonzo, iindlela zedolophu, iindawo ezisebenzisana ne-IMM kunye neenzuzo ze-IMM zaxoxwa, ngelixa ubunzima bokumisela iinkqubo e-Istanbul beziziswa kwi-ajenda.
Icandelo leZiko eliHlangeneyo elivunyelwe nguRhulumente
City City Okrelekrele Transportation Umgangatho Turkey ...
I-Workshop ye-Smart Transportation yenziwa kwiIzmir
Namhlanje kwimbali: 29 ngo-Matshi 1880 Yakhiwa nguRhulumente…
Namhlanje kwiMbali: 29 Matshi 1880 Yakhiwe nguRhulumente
I-Smart City ibonisa ukususela kwi-Smart City
I-Smart Cities kunye ne-Workshop System
Indawo yokusebenzela yokucwangcisa iSmart City iya kubanjelwa eKayseri
I-Bursa Smart City Projekthi isebenza iziqhamo
I-Kars ukuya kwisiCwangciso se-Smart Smart
I-Smart City Platform yasungulwa e-İzmir
Ummandla we-Smart City weSakarya unomdla omkhulu
UKayseri ufumana i-Smart City iSample Application Award
I-Denizli ifumana 'i-Smart City Award'